The Ab Presents Nepal » हङकङको एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगो लागि हुँदा ८ जना नेपालीको मृ*त्यु र १२ जना घाइते!
हङकङको एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगो लागि हुँदा ८ जना नेपालीको मृ*त्यु र १२ जना घाइते!
हङकङको जोर्डनको केन्टोन रोड ५६० स्थित एक नेपाली क्लब (गैरकानुनी रुपमा संचालित रेष्टुरेण्ट) ‘जिरे खुर्सानी’मा आगलागी हुदाँ कम्तिमा7जनाको मृत्यू भएको छ। मृत्यु हुनेमा १० वर्षिय बालक सकित ४ पुरुष र ३ महिला रहेको बताइएको छ। त्यस्तै १२ भन्दा धेरै घाइते भएको जनाएको छ ´।
नेपालीको एक समुहले दिपावली सहित जन्मोत्सब मनाउने क्रममा अचानक आगलागी भएको हुनसक्ने बताइको छ ´।हङकङको समय अनुसार ८ बजे बाट सुरुभएको आगलागी १० बजे मात्र नियन्त्रण भएको छ । घाइतेहरुलाई कङवा हस्पिटलमा उपचार भइरहेको स्थानिय समचारले जनाएको छ ´।
प्रतक्षदर्शीका अनुसार आगलागि भएपछि झ्यालबाट समेत हामफलेको थियो ।´यसघटना प्रति हङकङका कार्यकारी प्रमुख केरीलामले समबेदना दिइसकेका छन । त्यस्तै, आधुनिक्ताको नाममा बढेको विकृतीले गर्दा निम्त्याएको घटना भन्दै सामाजिक संजालमा देखिएको छ ´।